मामा मलाई नमा,र्नु’भन्दा खुकुरीको धारले नाता हेर्दैन भन्दै भूपेन्द्रमाथि नवीनद्वारा खुकुरी प्र,हार ! - Onlines Time
मामा मलाई नमा,र्नु’भन्दा खुकुरीको धारले नाता हेर्दैन भन्दै भूपेन्द्रमाथि नवीनद्वारा खुकुरी प्र,हार !
टीकापुर, २६ कात्तिक । ‘मामा मलाई नमार्नु,’ भूपेन्द्र बडुवालले हात जोड्दै विन्ती गरेका थिए ।
तर, कैलालीका ग्याङस्टर नन्दु भनिने नवीन रावलले छाडेनन् । खु,कुरीको धा,रले ना,ता भन्दैन भाञ्जा’ भन्दै नन्दुले ल,खेट्दै प्र,हार गरेका थिए ।
प्र,त्यक्षदर्शीका अनुसार २३ का,त्तिकको साँझ ९ बजे भूपेन्द्रमाथि खु,कुरीसहित नवीन रावलको समूहले आ,क्रमण गरेको थियो । नाताले नवीन रावल भू,पेन्द्र बडुवालका मामा पर्छन् । टाढाको नाताले उनीहरुबीच चिनजान पनि थियो ।
तर, योजनाव”द्ध तरिकाले डा”केर भूपेन्द्रको ह”त्या भएको थियो ।भूपेन्द्रलाई आफ्नै साथी कपिल श्रेष्ठले पेट्रोलको बहानामा डाकेका थिए । दिपेश न्यौपानेलाई लिएर सुरुमा केराबारीमा पुगेका थिए ।
तर, अ,सुरक्षित ठानेर फ,र्किएका थिए । उनलाई देखेर नवीन रावलको समूहले पिछा गरेको थियो । पछि जमरापुल सिद्धार्थ होटल नजिक रोकेका थिए । उनीमाथि आ,क्रमणको योजना प,हिल्यै बु,निएको थियो ।
जमरापुलमा पुगेपछि नवीन रावलको समूहले कुरा गर्ने भन्दै रोकेका थिए । सि,द्धार्थ होटल नजिकै भूपेन्द्रको आफन्तको घर पनि थियो । त्यहीं कुरा गर्दा गर्दै नवीनले खु,कुरी निकालेका थिए ।
नवीन रावलसहित उनको समूहले छाति, कोखा,गर्दनलगायतका भागमा खु,कुरी प्र,हार गर्यो । ह”त्या नै गर्ने गरी आ”क्रमण गरेर उक्त समूह फरार भयो । आ”क्र”मणका क्र”ममा भूपेन्द्रले गु,हार मागे । तर, धेरै ढिलो भइसकेको थियो ।
उनी र,ग,तमा लतपत्तिएर लडेका थिए । त्यहाँबाट उठाएर अ”स्पताल लगिएको थियो । अस्पताल लाँदा सम्म उनको होस थियो । प्रत्यक्षदर्शीका अनुसार उनी बोल्दै थिए । तर, विस्तारै शिथिल हुँदै गए । छ”टपटिदा छ”टपटिदै मृ”त्यु भयो ।
टीकापुर अ”स्पतालले उनलाई मृ:त घो’षित गर्यो ।कसरी भयो झ”गडा भूपेन्द्र ह:त्या प्र”करणमा कैलालीका दुईजना ग्या’ङस्टर’को वि”वाद जोडिएर आउँछ । एउटा समूहको ने”तृत्व नवीर रावल र अर्को समूहको नेतृत्व जयन्द्र शाहीले गर्दै आएका छन् ।
दुवैलाई राजनीतिक संरक्षण पनि छ । नवीन रावल र जयन्द्र शाही १० वर्ष अघिसम्म मिल्ने साथी थिए । काठमाडौंमा रहँदा निकै मिल्थे । उनीहरुले आ”पराधिक गतिविधि गर्दै आएका थिए । पैसाको लेनदेनले दुवैबीच फाटो आयो ।
कैलालीमा यी दुईले फरक समूह खडा गरे । नवीन रावल चीसापानी र जयन्द्र शाही टीकापुर केन्द्र बनाएर गु,ण्डागर्दी गर्थे । यसै वर्षको तीजलगत्तै नवीनले भूपेन्द्र बडुवाल, मोहन शाही र प्र”काश रिमाललाई लम्कीस्थित झुंगा रिसोर्टमा डाकेका थिए।
उनले जयन्द्रको समूहमा नबसी आफ्नो समूहमा आउन दबाब दिएका थिए । तीनैजनालाई झा”पड पनि लगाए । भूपेन्द्रले भने आफू कुनै समूहमा नरहेको र विदेश जान लागेको जवाफ दिएका थिए ।
नवीनले भूपेन्द्रसहित तीनजनालाई ल,म्की बोलाएर कुटपित र ध,म्की दिएको भन्ने खबर जयन्द्रसम्म पुगेको थियो । उनी लम्की पुगेर आफ्ना समूहकालाई कु टपि ट गरेको भन्दै आ”क्रो”शित भए ।
झुंगा रि,सोर्टमा गएर सबैलाई थर्काएका थिए । यो घ”टनापछि नवीन रावल र जयन्द्र शाहीको समूहबीच झन् मन”मुटा”व भयो । उनीहरु एक अर्काको समूहमाथि आ”क्र”मण गर्ने योजना साथ बढ्न थाले ।
भूपेन्द्र काठमाडौमा अध्ययनका क्र”ममा थिए । उनी अमेरिका जाने प्रक्रियामा थिए । बागबजारस्थित बिफिनिटिभ एडकेयरमा पीटीईको तयारी गर्दै थिए । बिजनेश उकाउन्टमा स्नातक पनि गरिरहेका थिए ।
तिहारको बिदा अगाडि उनी कैलाली पुगेका थिए । तिहारमा घर नजाऊ भनी एजुकेशन सेन्टरका शिक्षकले पनि बडुवाललाई भनेका थिए । तर, उनी तिहारलगत्तै आउँछु भनी गएका थिए । तर, फेरि काठमाडौं फ,र्कन पाएनन् ।
अहिले भूपेन्द्र बडुवाल ह”त्या प्र”करणमा राजनीतिक संरक्षणको ग”तिविधि समेत हुन थालेको छ । नवीन रावल स्थानीय केही नेताहरुसँग नि:कट भएकाले उनलाई जोगाउने प्रयास हुन थालेको छ । नवीन अझै फरार छन् ।
उनी भारत प:लायन भएको च:र्चा छ । प:क्राउ परेका अन्य व्यक्तिहरुलाई बचाउन स्थानीय केही नेताहरुले माथिल्लो तहसम्म श:क्तिको दु:रु:पयोगको प्र:यास थालेको बुझिएको छ ।- रिपोर्टर्स क्लब नेपाल
Prevहेर्नुस् !श्रीमान विदेशबाट श्रीमती भेट्न आए,यता श्रीमती आलु व्यापारीसँग टाप (भिडियो हेर्नुस्)
Nextभोको पेट झोलाभरि ढुङ्गा बोकेर यसरि हिड्दै यी दुखिया बृद्ध बुवा,कठै बिचरा (हेर्नुस् भिडियो )